Kedu ihe bụ snow donuts na otu esi akpụ ha? | Netwọk Mgbasa Ozi
Foto - elzo-meridianos.blogspot.com.es
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe mmasị ịga mkpagharị ma ọ bụ igwu egwuregwu n'ugwu snow, ị nwere ike nwee ihu ọma iji hụ snow donuts. Ana m ekwu ma eleghị anya n'ihi na ọ bụ ihe omimi nke ihu igwe, nke na-eme naanị n'ọnọdụ ndị akọwapụtara.
A chọpụtala ụfọdụ na, na mgbakwunye na nke na-adịghị ahụkebe, eruola ogo dị oke: ihe dị ka centimita 70. Ma, Olee otú ha si kpụrụ?
1 Kedu ihe bụ rollers ma ọ bụ donuts?
2 Olee otú ha si kpụrụ?
Kedu ihe bụ rollers ma ọ bụ donuts?
Anyị gaa n’ugwu ma ọ bụ n’ebe snow na-acha, ikekwe anyị ga-anọ obere oge mee snowball. Mụntakịrị na-enwekarị mmasị igwu ha egwu, na-atụpụrụ ha ndị okenye ka ha nwee obi ụtọ. Ọfọn, snow donuts ha bụ ihu ọma, na-abụkarị oghere, nke e mepụtara n'ụzọ nkịtị n'ụzọ anyị ga-agwa n'okpuru.
Ha dị nnọọ iju ma na-achọ ịmata ihe nke na ọ dị mfe ijuanya ịhụ otu. Ọ bụrụ na a hụ ha, enwere ike ịhapụ ohere iji see ha.
Ka ha wee nwee ike ịmalite a ghaghị imezu ọnọdụ ndị a:
Ọnọdụ okpomọkụ kwesịrị ịdị na oyi.
Snow na-asọkọta ọnụ ngwa ngwa.
Ikuku gha efesi ike.
Na, na mgbakwunye, teren ga-enwe otu mkpọda.
N'oge ahụ, enwere foto ndị ọzọ banyere ihe ịtụnanya ndị a hibere na North America na ịntanetị, mana n'eziokwu, a ga-ahụ ha ebe ọ bụla na ọnọdụ ndị a kpọtụrụ aha, ọ nwere ike bụrụ setịpụrụ ụfọdụ ihe ọ bụla ịchọrọ.
N'ikpeazụ, ebe anyị na-amaghị mgbe ma ọ bụ ebe ihe ịtụnanya ndị a ga-etolite, aga m ahapụ gị vidiyo ka, ma ọ dịkarịa ala, ị ga-ahụ ha wee chee na ị nọ ebe ahụ. Kporie ya.
You nụtụla banyere ọnọdụ ihu igwe a?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Kedu ihe bụ snow donuts na otu esi akpụ ha?